Clear Parts | Hamafana Prototypes | Prototyping haingana optika - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
SERVICE / Clear Prototyping
Hamafana ireo prototypes optika
Fampiharana marobe no mahazo tombony amin'ny fampiasana prototypes mazava miaraka amin'ny milina acrylic mangarahara (PMMA) sy polycarbonate (PC) hanampiana amin'ny fijerena ny fizotrany na hanatsarana ny estetika. Anisan'izany ny jiro sy jiro automatique, ny torolàlana ary ny fampisehoana jiro dia mitaky toetra mampiavaka ny optika rehetra.
Mifantoka amin'ny antsipiriany momba ny optika plastika izahay ary manana ny fahalalana ny prototypes optique mazava ilaina amin'ny milina tsy misy kilema. Ny vokatra farany dia mazava ary tsy misy marika na rangotra.
Manam-pahaizana manokana amin'ny milina sarotra amin'ny Modely mazava & Optical
CreateProto dia manolotra vahaolana isan-karazany ho an'ny faritra mazava sy mangarahara mba hihaona amin'ny takiana rehetra, ao anatin'izany ny machining CNC, fanariana fantsona ary teknika famolavolana tsindrona haingana. Ny prototypes mazava sy ny milina optika prototypes dia manondro ny famolavolana acrylic mangarahara (PMMA) sy polycarbonate (PC), ary ny ankamaroan'ny rindranasa dia misafidy azy ireo hahazo vokatra mazava.
Mandritra ny masinina, dia karakarainay ireo faritra plastika mazava anao ary manana fahalalana momba ny plastika ilaina amin'ny milina tsy misy kilema. Ny famitana mazava tsara amin'ny singa plastika dia azo tanterahina amin'ny fomba polishing mety. Createproto dia mampiasa mpanao asa-tanana mahay manana traikefa an-taonany maro amin'ity fizotrany manokana ity. Ny fomba fiasa azo ampiharina sy malefaka dia ahafahantsika manohana tanteraka ireo tetikasam-pampandrosoana prototype mazava sy optika.
Amin'ny maha mpanamboatra prototype matihanina anay, dia mirehareha amin'ny famoronana singa optika akrilika mazava ao amin'ny sehatry ny milina plastika. Ho an'ny fitakiana milina akrilika mazava tsara, nanamboatra teknolojia famolavolana plastika tena izy izahay izay afaka manome kalitao ambonimbony kokoa ho an'ny acrylic CNC (PMMA), izay tsy tokony hihoatra ny R0.005 "(R0.125mm) ny tariby masinina ho an'ny antsipirian'ny optika. ny fandeferana amin'ny masolavitra optika dia hahatratra +/- 0,001 "(+/- 0,025mm).
Ny fanavaozana tsy tapaka ny fitaovan'ny milina sy ny fitaovana fanapahana dia mamela anay hitazona ny faritra plastika mazava tsara ao anaty orinasa. Miaraka amin'ny fanatsarana bebe kokoa ny fahaiza-manao ara-teknika sy ny fitaovana mandroso, azonay ampiasaina ny milina karazana singa optika amin'ny endriny sarotra rehetra takiana.
Izahay dia manambatra ny fahaizan'ny milina an'ny milina 3-axis, 4-axis na ny axis CNC milling milling aza. Noraisinay ihany koa ny teknolojia famolavolana diamondra farany tamin'ny famokarana ultra mazava. Ity dia teknika antsoina hoe Single Point Diamond Machining (SPDM na SPDT) izay afaka mifanandrify amin'ny fahaizan'ny mikraoba axis 5-axe hamokatra karazana solomaso sy torolàlana maivana karazana kalitao optika tsara ao anaty lamina na endrika tsy fanao.
Ny famolahana akrilika dia afaka manampy amin'ny fanomezana ny fahazavana tsara indrindra sy ny fandefasana hazavana amin'ireo plastika mazava rehetra. Na dia acrylic CNC (PMMA) aza dia tena ilaina mba hahatratrarana famaranana milina tsara alohan'ny handefasana azy mba hiantohana ny refy mitsikera, sarotra ny mahazo mazava tsara.
Ny fanaingoana akrilika dia mitaky fahaizana manokana satria ny akrilika dia fitaovana mora tohina amin'ny fihenjanana ary marefo. Ny famolavolan-tanana dia mitaky isa samihafa amin'ny fizotran'ny fanosorana ampiasaina miaraka amin'ny taratasy fasika sy ny fametahana poloney izay hanala ireo fitaovana ambonimbony ary hamela ny haavony avo lenta sy mazava tsara.
Ny famolahana fatratra dia mitaky ny asa sanding manomboka amin'ny 400 # na 600 # taratasy fasika hanaisotra ireo marika fampiasa amboalohany amin'ny voalohany, avy eo hiakatra hatramin'ny 800 # -1000 # -1500 # ny haavony ary hifarana amin'ny 2000 # taratasy fasika, ny faritra voalamina dia milamina tsara nefa tsy misy tsipika milina sy marika. Farany dia mbola mila mampiasa paty polishing ihany isika mba hanadiovana ny fizotrany, ary ny faritra farany dia mazava sy mangarahara nefa tsy misy marika amam-bika na rangotra misy famaranana ny kalitaon'ny optika.
Machining polycarbonate (PC) CNC ary milina etona
Mikasika ny polycarbonate (fohy amin'ny PC), ny tanjaka dia matanjaka kokoa noho ny acrylic, ary afaka manao toetra mekanika tsara kokoa izy rehefa ampiasaina ao amin'ny tontolon'ny mari-pana. Polycarbonate koa dia iray amin'ny plastika mangarahara mahazatra indrindra izay faharoa amin'ny mazava akrilika. Matetika izahay dia mamaky sanding malefaka & etona poloney, izy ireo dia fomba mahazatra safidy ho an'ny ankamaroan'ny fampiharana.
Miaraka amin'ny traikefa poloney manan-karena, afaka manana endrika mahatalanjona ny CreatProto na ao anatiny na ivelan'ny faritra. Ny kalitao tsara indrindra dia avy amin'ny fisafidianana ireo fitaovana milina, ny fitsaboana ny hafanana, ny fikolokoloana diamondra, ny fomba fanodinana ary ny teknolojia fanodinana, mba hahafahantsika manamboatra ny ampahany tsara indrindra miaraka amin'ny marika fitaovana milina kely indrindra amin'ny faritra manan-danja sy manan-danja.
Rehefa mampihatra ny fitsaboana hafanana mendrika isika, ny fomba famolavolana ary ny fomba fanosorana, ny polycarbonate dia mety hahazo ny fahombiazan'ny optika mitovy amin'ny acrylic ary matetika ampiasaina amin'ny fampiharana toy ny jiro, fantsom-pahazavana ary fampisehoana.
Ny famaohana etona dia azo ampiasaina hanatsarana ireo singa mampiavaka ny fitaovana toy ny polycarbonate, ary tena mifanaraka amin'ny polycarbonate polishing misy endri-javatra kely ary manolotra fanatsarana ny famaranana anatiny sy ivelany. Ny gorodona madinidinika sy ny tsy fanarahan-dalàna kely hafa dia azo esorina amin'ny ampahany amin'ny polycarbonate machining amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo. Rehefa vita tsara dia afaka manome prototypes optika famaranana kalitao tsara ny polishing etona.
Dingana fanamainana polikarbonana, mitovy amin'ny poloney manaron-tànana akrilika, ampiasainay ny taratasy fasika handosirana ny tampon-tany voalohany hanesorana ireo marika marika manomboka amin'ny 400 # ka hatramin'ny 2000 # taratasy fotsy. Ny etona dia noforonina tamin'ny alàlan'ny nandrahoina kaontenera misy methylene klôroida, avy eo ampiasao ny etona hikoriana ambonin'ny polycarbonate. Rehefa mamely ny etona dia miempo amin'ny molekiola ary mamadika azy mazava. Ny fizotrany rehetra dia tsy maintsy asiana anaty efitrano mihidy sy misy rivotra tsara, izay manakana ny mpandraharaha tsy hifandray amin'ireo setroka manimba. Aorian'ny fizotran'ny fanosorana dia tsy maintsy alefa maina ny ampahany mba hanafoanana ny methylene chloride.
Hamafa ny fandefasana urethane amin'ny fanaovana prototypes isa kely
Urethane Vacuum Casting dia fomba haingana sy ara-toekarena ahafahanao mamorona ampahany marobe rehefa takiana habetsahana ambany. Azo atao ny mampiasa casting urethane mba hamokarana ireo faritra mazava tsara. Na izany aza, ity asa ity dia mitaky traikefa manan-karena amin'ity faritra ity, indrindra raha ny amin'ny tranga iray izay manahirana ny pitsopitsony momba ny fanariana ampahany.
Ny UseProto dia mampiasa fitaovana sy teknolojia tena tsara isan-karazany izay mamela antsika hahomby amin'ny fizarana ampahany mazava tsara tsy misy lesoka na fandavana be loatra, satria azontsika ampiharina ny fampifangaroana ny fizotrany marina sy ny silika ary ny resina mety.
Ny fisafidianana ny agents fanafahana sahaza azy ary ny fampiharana azy io amin'ny fomba mahomby mba hisorohana ny fikorontanana sy ny tsy fetezan'ny tampon-trano dia tena zava-dehibe ihany koa, ireo mpamokatra fanafahana Silicone dia mihetsika matetika miaraka amin'ny resins mazava tsara, ka hiteraka olana amin'ny tarehy na lesoka hafa, ka izany no antony hisafidianan'ny bobongolo maro fitaovana maoderina avo lenta amin'ny bobongolo silika hialana amin'ny olana toy izany amin'ny famoahana ny fizotrany, saingy mbola fanamby lehibe ihany koa ny famoahana resins mazava.
Prototype Optical Compnents an'ny jiro mandeha amin'ny fiara
Mifototra amin'ny prototypa jiro automatique i CreateProto ho serivisy iray manontolo izay nahafahantsika nanitatra ny fahalalantsika sy ny zavatra niainantsika tamin'ity faritra ity, ary io no teknolojia sy famokarana manan-danja indrindra amin'ny CreateProto. Ny famoronana fomba fampivelarana ireo prototypes jiro fiara tsara indrindra ao amin'ny indostria dia manome antoka antsika hanome ny mpanjifanay rehetra ny tolotra prototyping automotive tsara indrindra.
Ny fomba fiasa mihetsiketsika sy mavitrika dia ahafahantsika manohana tanteraka ireo tetikasa fampandrosoana ny jiro automatique. Avy amin'ny fanadihadihana momba ny famolavolana singa mekanika sy ny fanandramana injeniera momba ny fampandrosoana fotometrika hanehoana tetikasa jiro fiara, afaka manohana amin'ny ambaratonga rehetra izahay.
Ny fahaiza-manao ny famolavolana jiro sy ny famokarana jiro dia faritra lehibe ary mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahaiza-mandanjalanja amin'ny fahaiza-miasa amin'ny famolavolana singa rehetra. Ny traikefanay amin'ny sehatry ny prototype automotive dia nanome antoka fa hankasitraka tanteraka an'io faritra io izahay ary hiara-hiasa amin'ny mpanjifantsika mba hahazoana antoka fa ilaina sy mahavita azy ireo.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao teknika fanatsarana bebe kokoa sy fitaovana mandroso, afaka manamboatra karazana solomaso ivelany izahay, solomaso anatiny, taratra, fantsom-pahazavana, torolàlana fisarihana, ary torolàlana goavambe amin'ny endrika sarotra rehetra, izay tsy mila na inona na inona 3, 4, na 5 -axis machining CNC, na dia ny teknolojia famolavolan'ny diamondra farany an'i Single Point Diamond Machining (SPDM na SPDT) aza.
Manana traikefa manan-karena ihany koa izahay hiantohana ny tadin'ny fitaovana kely indrindra vita amin'ny milina 0.1mm hanodinana ny antsipirihany ho an'ireo faritra optika sy faritra. Ny fandeferana ambonin'ny optika vita amin'ny masinina dia mety hahatratra +/- 0.02mm. Avy eo ny famitana dia azo atao ny mazava tsara indrindra sy ny fandefasana hazavana amin'ny alàlan'ny fizotrantsika manokana. Ny singa optika farany dia tena marina, kalitao optika tsara ary tsy misy marika na gorodona.
Fandalinana tranga 1: Torolàlana maivana ho an'ny milina mazava ho an'ny fitsapana injeniera momba ny fampandrosoana Photometic
Ny torolàlana momba ny jiro prototype sy ny fantsom-panafody dia mampiseho aminao tsara ny fomba fijerin'ny fiaranao amin'ny tena fiainana, hanampiana anao hisoroka ireo lesoka famolavolana lafo vidy. Amin'ity fomba ity, azonao atao ny manombatombana ny fijery farany ny hevitra famolavolana estetika sy ny fitsapana injeniera momba ny fampandrosoana fotometrika. Ny endrika manandanja indrindra amin'izy ireo dia ny antsipiriany optique ho an'ny mpitari-dalana hazavana iray manontolo, ny fotoana famahanana ireo endri-javatra ireo dia ho lava sy marina, ny fitaovana farany ampiasaina amin'ireo endri-javatra ireo dia ny R0.1mm, izay fohy sy kely, ny famaranana marina ny machining dia manapa-kevitra ny amin'ny kalitaon'ny fahombiazan'ny jiro optika.
Atambatra ny fikosoham-bary 5-axis miaraka amin'ny teknolojia famolavolana diamondra izay manome antsika ny fahaizana milina endrika sarotra kokoa sy antsipiriany optique, mampiasa fananganana tokana, fa tsy manao fampitaovana ilaina ary mamerimberina toerana isaky ny asa amin'ny milina samihafa.
Jacky, mpitantana ny varotra anay, dia nanampy hoe: “Hatreto dia maro amin'ireo mpanjifanay no nandray ny vaovao, ary ny RFQ dia manomboka miditra amin'ny faritra sarotra kokoa. Ireo dia baiko avy amin'ny mpanjifa izay efa ananantsika laza tsara amin'ny famadihana ireo singa kalitao sy fandefasana ara-potoana. Ny vaovao tsara dia izao aho afaka manatona ny mpanjifa amin'ny indostria vaovao izay mila fahaizana milina sarotra kokoa. ”
Fandinihana tranga 2: Prototyping tanky solika mandeha amin'ny fiara amin'ny PMMA mazava tsara voaravaka ho an'ny varotra varotra
Amin'ity tranga ity, Famoronana fanesoana animated ho an'ny atrikasa teknolojia mifandraika amin'ny foto-kevitra vaovao momba ny diesel madio, fiara mifono vy voatsindry ho an'ny fiara hybrid plug-in, rafitra fitehirizana entona misy hidrogen avo be.
Amin'ny maha orinasa mpanamboatra prototypot dia fantatry ny Createproto ny maha-zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny vondron'olona mpamorona sy atrikasa teknolojia. Ny fanatrehana sy fampirantiana amin'ny seho ara-barotra dia manome fatra-pivoarana betsaka ho an'ny vokatra iray manangana tamba-jotra amin'ireo orinasa hafa ary manome ny mpamorona ny fotoana hiroboka ao anatin'ny fiarahamonina mpamorona famoronana hafa. Manana traikefa izahay ary ankafizinay ny miara-miasa amin'ireo karazana haitao rehetra izay hampandeha haingana ny vokatrao.
Misy fomba isan-karazany amin'ny fanaovana maodely, ary misy ny fizotrany hafa izay afaka mamelona ny zavatra noforoninao. Na namorona maodelin-kevitra ianao na prototypa miasa tanteraka, dia nanome ny tena vokatra ianao mba hanomezana toky fa azo hamidy ho an'ny mpampiasa vola sy sarobidy amin'ny mpanjifa ny vokatrao.
Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping, Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana,